Home OSTANIA FOOTBALL STORIES Ny tantaran'i Harry Kewell momba ny tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana tsy hita isa
Ny LB dia manolotra ny tantara manontolo momba ny sariohatry ny baolina kitra malaza amin'ny anarana; 'Harry Kool'. Ny tantaran-tantaran'i Harry Kewell momba ny tantaram-pianakaviana sy ny tantaram-piainana tsy fantatra momba ny tantaram-piainana dia mitondra ny fitantarana feno momba ny hetsika mahatalanjona hatramin'ny fahazazany hatramin'izao. Ny analizy dia mirakitra ny tantaram-piainany talohan'ny lazany, ny fiainam-pianakaviana ary ny maro amin'ireo zavatra tsy fantatra sy tsy fantatra momba azy. Harry Kewell dia olona mbola tsy nahatratra ny tanjony feno raha oharina amin'ireo tia azy Lionel Messi ary C. Ronaldo. Ianao, mari-pamantarana manan-danja ny fiposahan'i Aostralia teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ankehitriny, raha tsy misy adeu, dia aleo manomboka.
Harry Kewell Childhood Story Plus Untold Biography Facts-Voalohandohan'ny fiainana
Sary nalain'i Harry Kewell
Teraka tamin'ny 22 September 1978 tany Sydney i Kewell ka nanan-janaka anglisy, Rod Kewell ary renin'i Aostraliana, Helen Kewell. Nihalehibe i Harry nanohana an'i Liverpool tamin'ny Diviziona voalohany tamin'ny baolina anglisy. Izy no Liverpool izay nahaliana azy tamin'ny baolina kitra.
Nahazo ny fianarany tany aloha tany amin'ny sekolim-panjakana Smithfield izy ary sekoly ambaratonga faharoa ao St. High School Park taloha alohan'ny handefasana azy any amin'ny sekoly fianarana Westfield Sports High. Nandritra ny fotoanany tao amin'ny fianarana ambony High School any Westfields, i Kewell dia nilalao teo amin'ny sehatry ny solontenan'ny fifaninanana ho an'ny sekoly sy ny klioba.
Tamin'ny taona 15 taona dia efa anarana nomena anarana tao amin'ny baolina kitra Aostraliana i Harry. Izany no nahatonga ny maro ho tia azy. Izany dia tamin'ny anaran'ny anaram-bosotra 'Harry Kool', dia niakatra. Nijery azy rehetra ny olona mba ho mpilalao baolina amin'ny nofinofiny.
Harry Kewell Childhood Story Plus Untold Biography Facts-Fiainana ao amin'ny fianakaviana
Teraka tamin'ny teny anglisy Rod Kewell sy ny renin'i Aostraliana Hellen Kewell i Harry Kewell. Miaro azy ireo amin'ny fampahalalam-baovao satria tsy misy vaovao momba azy ireo ao amin'ny aterineto. Mipetraka any Sydney toy ny tamin'ny fotoana nanoratana izy ireo.
Harry Kewell Childhood Story Plus Untold Biography Facts-fifandraisana
Nanambady vehivavy malaza iray i Harry. Ankoatra ny mpilalao sarimihetsika britanika Sheree Murphy izy io. Sheree Victoria Murphy dia teraka 22 August 1975 tao Stoke Newington, avaratr'i Londres. Izy no zaza amam-behivavy ary zazavavy iray ao amin'ny fianakaviana misy ankizy dimy.
Nihaona izy ary nanjary tia an'i Harry Kewell tao amin'ny toeram-pandihizana malaza Majestyk tao Leeds, taona 2000. Taorian'ny fampiarahan'ny 3 taona, nanapa-kevitra ny roa ny antoko roa hifamatotra ny knot. Nivady tany Las Vegas tamin'ny volana 2003 izy ireo.
I Harry sy Sheree dia manan-janaka efatra, zanakavavy telo ary zanakalahy iray. Dolly teraka 14 Janoary 2012, teraka tamin'ny 17 ny volana 2003 i Ruby raha teraka i Matilda 19th of March, 2008 ary Taylor (lahy) teraka 2001.
Mpilalao sarimihetsika sady mpilalao televiziona anglisy izy, fantany tsara indrindra noho ny andraikiny amin'ny maha-Tricia Dingle azy ao amin'ny seza Opera ITV Emmerdale sy Eva Strong in the Channel 4 soap opera tena tia ny vadiny. Matetika izy ireo no mihantona sy mijery lalao tennis sy baolina kitra.
Harry Kewell Childhood Story Plus Untold Biography Facts-Hamaky ny tohiny ...
Nalefany ny mpikatroka malaza tamin'ny voalohany 2013 taorian'ny nandaozany azy tsy ekipa. Talohan'ny fanapahan-keviny, maro no nanondro azy ireo fa manana ny fifandraisana misy eo amin'ny mpilalao baolina kitra any Australia ao amin'ny fanatanjahantena aostraliana. Nanafintohina ny maro tamin'ireo nahalala azy ny fomba nisarahan'izy ireo.
"Maniry an'i Harry ny tsara indrindra amin'ny hoavy aho ary mahafinaritra ny miara-miasa aminy", hoy izy. Nilaza i Mandic avy any Parisy. Ny fisisihana dia toa miavaka ihany, na dia inoana aza fa tsy nanaiky ny ho avin'i Kewell ny mpivady.
A tantara mahatsikaiky momba an'i Harry Kewell dia izany no anarany "Buyucu Harry" Anarana iombonana amin'ny teny tiorka "Harry the Wizard". Ity anarana ity dia nalaina avy amin'ny Harry Potter. Raha nantsoin'ny sasany tamin'ireo ekipa hafa azy izy Oz Buyucusu Anarana iombonana amin'ny teny tiorka
Nirotsaka tao amin'ny Ligin'ny Tanora Vaovao Atsimo any Wales izy izay maneho ny ambany-13 hatramin'ny ambany-15 Marconi Stallions ekipa, nampiofana an'i Stephen Treloar, ary nanatrika fampiofanana manokana ihany koa tamin'ny NSW Junior Soccer Academy, nampiofanain'i David Lee.
Tamin'ny taona 14, dia nandeha tany Thailandy, Italia ary Angletera i Kewell niaraka tamin'ny ekipa Marconi eo ambany 14 izay vao nahazo ny lohateny ho an'ny firenena. Ny ekipa dia nilalao lalao nanohitra ny ekipa zandriny Milan, ary koa ny fianarana any Angletera. Ity no fotoana voalohany nialan'i Kewell tany amin'ny firenena saingy nanome azy ny fanandramany baolina kitra voalohany ao Eorôpa, ary nanatrika ny lalao Premier League voalohany ihany koa izy ho mpijery. Tamin'ny taona 15 dia nomena fahafahana hiverina tany Angletera sy ny fitsarana i Kewell Premiership Football club Leeds United mandritra ny fe-potoana efa-bolana ho ampahany amin'ny Big Brother Movement any Aostralia. Nandeha tany Angletera niaraka tamin'ny hoaviny i Kewell Socceroo mpiara milalao aminy Brett Emerton. Samy nahomby izy ireo nandritra ny fitsapana tao Leeds, na dia i Kewell ihany aza no afaka nandray ny tolotr'ilay klioba noho ny lovan'ny Anglisy ny rainy, izay nahafeno ny fepetra momba ny visa.
Kewell dia nantsoina hoe PFA Young Player an'ny taona tao amin'ny 2000 ary namono ny tanjona 63 tao amin'ny 242 niseho ho an'i Leeds alohan'ny niakaran'i Liverpool tao amin'ny 2003.
Nisaotra an'i Leeds United i Kewell noho izy nanome azy loka sy Anglisy Premier League Liverpool izay nahazoany ny Ligin'ny UEFA Champions League tao amin'ny 2005 sy ny Cup FA tao 2006. Nahavita ny lalao nilalao tao Galatasaray any Torkia, Qatar ary tany Aostralia izy.
Harry Kewell Childhood Story Plus Untold Biography Facts-Manager Career
Ny kintan'i Leeds sy Liverpool Liverpool teo aloha dia voatendry ho mpandrindra ny League Two Crawley Town. Izany dia nitranga tamin'ny volana Mey 2017. Betsaka no mino fa ny dingana voalohany dia ny fitantanana.
Ny tatitra dia manondro fa tamin'ny volana mey, 2017, niasa tao amin'ny UEFA Pro License momba ny fanomezan-dalan'ny UEFA i Harry, ary nanampy an'i Warren Feeney, mpitsikilo an'i Irlandy teo aloha. Ny dikany dia midika fa indray andro any dia hampiofana toeram-piofanana ho tompondakan'i Lalao Tompondakan'ny Tompondakan'ny Tompondakan'ny lalao iraisam-pirenena. Ny hoavy dia mazava sy bevohoka ho an'i Harry.
Harry Kewell Childhood Story Plus Untold Biography Facts-Mpandresy tamin'ny medaly Alex Tobin
A very Zavatra mahaliana ho an'i Harry Kewell dia izy no nandresy ny medaly Alex Tobin. Ity medaly ity dia heverina ho loka goavana indrindra ho an'ny mpilalao baolina any Aostralia handresy.
Nahazo io loka io izy taorian'ny fanambaràna ny fisotroan-dronony ho mpilalao tamin'ny taona 2016.
Harry Kewell Childhood Story Plus Untold Biography Facts-Ny mpilalao baolina kitra voalohany indrindra ho an'ny ekipam-pirenena
Ny tena mahavariana azy dia ny hoe, izy no mihazona ny rakitsoratry ny maha-mpilalao tanora indrindra an'i Aostralia amin'ny lalao iraisam-pirenena. Nandritra ny taonan'ny 17 taona sy ny 7 volana dia niady tamin'i Chili izy ary nahazo io voninahitra io ho an'ny tenany.
Kewell no voalohany indrindra tamin'ny Socceroos fony izy nilalao tany Aostralia tamin'ny 1996 nanohitra an'i Chili tamin'ny taona 17 taona sy fito volana.
Izy dia tonga avy amin'ny antsoina hoe taranaka taratra volamena any Aostralia. Ny tsara indrindra dia i Harry Kewell no lehilahy tompon'ity taranaka ity.
Nianjera ny tanora Aostraliana. Izy no tanora mpilalao PFA tamin'ny taona 1999-2000 ary voatonona tao amin'ny ekipan'ny PFA nandritra ny taona.
Ankoatra ny mpihira Socceroo Mark Viduka, dia nitaingina fiaramanidina goavambe i Kewell sy Leeds United. Indraindray izy ireo dia ny fihetsika mahery vaika indrindra nataon'ny Ligy Premier League, nitondra an'i Leeds ho any amin'ny ambaratonga goavambe misy ny semi-final UEFA Champions League ao amin'ny 2000-01. Tao ambadiky ny fahombiazan'ny fahombiazana, nandany ny tenany ho amin'ny fahaverezam-boninahitra i Leeds. Ny fivoahana an'i Kewell avy amin'ny klioba dia mbola mitoetra ho ratra misokatra any Yorkshire. Tsy nisy olona nameno ny toerany hatramin'izao.
Harry Kewell Childhood Story Plus Untold Biography Facts-Good Looks
Na i Sheree Murphy vadiny aza dia niaiky fa ny fanambadiany tamin'i Harry dia tsy mbola nandeha sambo hatramin'izay.
Ilay mpilalao sarimihetsika veterana dia nanambara fa tamin'ny faramparany, ny vehivavy dia nibitsibitsika tamin'ny fomba tsara teo anoloan'ilay lehilahy tsara tarehy teo anoloany, nitarika azy ireo andian-dàlana teo aminy sy ireo mpankafy am-pandehanana an'i Harry.
Harry Kewell Childhood Story Plus Untold Biography Facts-2nd Aostraliana mba hahazo ny loka ho an'ny lehilahy amin'ny fiadiana ny amboara eran-tany
Zava-mahagaga iray hafa momba azy ihany koa izy, izy irery no faharoa mpilalao baolina kitra Aostraliana nahazo ny loka Man ny fifaninanana tamin'ny lalao mondialy.
Nandritra ny fihodinana faharoa dia nitifitra teo amin'ny 79 izyth minitra no nitovy ny isa izay notakin'i Aostralia hiditra ao amin'ny dingana manaraka amin'ny fifaninanana.
Harry Kewell Childhood Story Plus Untold Biography Facts-Oseania mpilalao baolina lavitr'ezaka
Ny tena mahavariana momba azy dia izy no nandresy ny Oseania Footballer amin'ny taona ho an'ny taona.
Ity loka ity dia heverina ho iray amin'ireo loka natokana ho an'ny lalao baolina kitra. Na dia mahaliana kokoa aza ny hoe nahazo ny loka im-betsaka izy nandritry ny asany. Nandritra ireo taona noraisiny dia nahazo ny loka 1999, 2001 ary 2003 izy.
Harry Kewell Childhood Story Plus Untold Biography Facts-Karazan-tsambo tsy azo ihodivirana
Fa ny marina mampalahelo dia ny hoe ivelan'ny morontsirak'i Kewell dia mety nahantona ny kirarony tamin'ny andro nandaozany an'i Leeds tao amin'ny 2003.
Ny fifandimbiasana ny ratra naterak'izany dia nahatonga ny maro niantso azy- ilay mpilalao sarobidy indrindra izay efa novokarin'i Aostralia izay tsy niaina tamin'izany bola.
Navoaka i Harry Kewell ho ampahany amin'ny fivarotana afo amin'ny klioba taorian'ny fihemorana. Niaraka tamin'i Liverpool izy fa naratra tamin'ny fifandimbiasan-dalana iray, ary tsy niova mihitsy ny haavony izay nitarika ny tatitra 20 + tapitrisa tapitrisa tapitrisa avy amin'ny Inter Milan.
Ny Australian dia nandrombaka ny ligin'ny Champions League tamin'ny 2005 sy ny lahatsarin'ny FA Cup herintaona taty aoriana; Ny lozam-piarakodia farany, voan'ny kitroka, dia nitazona Kewell efa ho herintaona. Natsangany tamin'ny asany tao amin'ny klioba Tiorka Galatasaray ny asany, saingy notohizan'ny olana ara-pahasalamana izy. Very nandritra ny telo taona sy tapany tamin'ny asany tany Liverpool izy noho ny ratra nahazo azy.
Ny mpitsikilo (Bernie Mandic), Harry Kewell, dia nanamarika an'i Liverpool ho "fahafaham-baraka" ary nanambara fa ny tsy fahaizan'izy ireo dia nanimba ny asan'ny mpilalao.